I-Seychelles yoKhenketho kunye neQela leMidlalo liKhuthaza ukuFikela kuyo yonke i-Itali
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho kunye neQela leMidlalo liKhuthaza ukuFikela kuyo yonke i-Itali
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Seychelles yoKhenketho e-Itali
I-Ofisi yeSychelles yoKhenketho e-Italiyane ibambisene neClub Med, ibambe uthotho lweziganeko ukukhuthaza iSeychelles kulo lonke elase-Italiya ngaphambi kwesibhengezo sokuba iziqithi zeparadesi zoLwandlekazi lwaseIndiya yenye yeendawo ezi-6 kwaye amazwe ama-3 angaphandle kweYurophu abemi base-Italiya .
Ukusingathwa yi-Seychelles yoKhenketho, ii-arhente zokuhamba ezingama-30 kumnyhadala ngamnye zathuthwa kwisilayidi sasemini kunye nevidiyo kumoya wendawo ekuyiwa kuyo.
Umdla kwindawo ekuyiwa kuyo uphezulu kakhulu okoko kwavulwa nguRhulumente wase-Italiya wendlela yabakhenkethi eya eSeychelles.
Olu thotho lweziganeko zomntu-siqu yayilixesha elifanelekileyo lokunyusa ulwazi ngeziqithi.
Umnyhadala wokuqala wezorhwebo ububanjelwe eRoma kwihotele iMetropole ngoSeptemba 22, embindini wedolophu, walandelwa ngomnye eNaples ngoSeptemba 24 eClub Rosolino. Umnyhadala wokugqibela wenzeka kwi-NYX Hotel eMilan ngoSeptemba 28.
Ibanjwe ngu Seychelles yoKhenketho Ummeli wentengiso e-Itali, uDanielle Di Gianvito, kunye noMlawuli wezoRhwebo weClub Med B2B kunye neM & E e-Italy u-Anne-Laure Redon, iiarhente zokuhamba ezingama-30 zomnyhadala ngamnye, ezikhethwe phakathi kweQela Med labalingane abaphambili, bahanjiswa ngesilayidi sasemini kunye nevidiyo kumoya yendawo ekuyiwa kuyo. Oku kwalandelwa ziiseshoni zonxibelelwano.
Umnyhadala wabathengi eMilan ulandelwe nge-5 ka-Okthobha ebibanjelwe ngentsebenziswano nenethiwekhi ye-arhente yeGattinoni, kwiofisi yayo kumbindi weMilan. Umsitho ububandakanya isidlo sangokuhlwa kunye nentetho kwaye ubuzinyaswe ngabathengi abasebenzisa imali eninzi kwiarhente yokuhamba, kunye namanye amalungu othungelwano lokuhamba.
Umdla kwindawo ekuyiwa kuyo uphezulu kakhulu okoko kwavulwa nguRhulumente wase-Italiya wendlela yabakhenkethi eya eSeychelles kwaye olu luhlu lweziganeko ezenzeka ebantwini yayisisiganeko esifanelekileyo sokwazisa ngeziqithi njengendawo efanelekileyo yeholide kunye nokuthengisa intengiso yeholide.
IClub Med ikwaqinisekisile ukubhukisha kwitrimester yokugqibela yowama-2021 nakwisemester yokuqala yowama-2022. Oku kukwabulela kuthotho lwezinto ezintsha ezenziwa yiClub Med ukulungiselela ukuthengisa kunye notyalo-mali kwiClub Med Exclusive Collection, ebandakanya iSeychelles. Ukubaluleka kodidi lweClub Med Exclusive Collection lukhule nge-2022% xa kuthelekiswa neminyaka emi-15 eyadlulayo kwaye ngoku i-2% yentengiso iyonke. Njengoko i-COVID-30 itshintshile imikhwa yokuhamba, abathengi ngoku bakhangela ubumfihlo kunye namaziko aneendawo ezinkulu apho banokuphefumla khona inkululeko yabangaphandle, utshilo uNkosikazi Anne-Laure Redon.
I-Italiya kudala yaba yenye yeemarike eziphambili zabakhenkethi baseSeychelles Kwaye yayiyindawo yentengiso yesine ephezulu yemvelaphi, ivelisa ukufika kwe-27,289 ngo-2019 ngaphambi kokuqala kwe-COVID, kodwa yehla yaya kwi-2,884 ngo-2020 njengoko i-COVID kunye nezithintelo zokuhamba zambamba i-Itali. Ukusukela nge-10 ka-Okthobha i-2021, iindwendwe ezili-1,029 zaziye eSeychelles zisuka e-Itali.